China Yakapetwa girazi fekitori uye vagadziri | LYDGLASS
Sandblasting ndiyo imwe nzira yekumira girazi inogadzira kutaridzika kwakabatana negirazi rakaomeswa nechando. Jecha rinongoita hasha uye kana rikasanganiswa nemhepo inomhanya nekukurumidza, rinopera kumusoro. Iyo yakareba iyo sandblasting technique inoshandiswa kune imwe nzvimbo, iyo jecha rinowedzera kupfeka kumusoro uye nekudzika kwakatemwa.
Girazi rakagadzirwa nesandbhe rakagadzirwa nemvura yakasanganiswa neEmery uye yakasaswa pamusoro pegirazi pakudzvinyirira kukuru.
Iyi ndiyo nzira yekuipolisha. Kusanganisira girazi rakaputika uye girazi rakavezwa nejecha, igirazi chigadzirwa chinogadzirwa kuita chakatsetseka kana intaglio pateni pagirazi ne otomatiki yakatwasuka sandblasting muchina kana wehunyambiri sandblasting muchina. Makara anogona zvakare kuwedzerwa kune iyo pateni inonzi "jet-kupenda". "Girazi", kana rinoshandiswa pamwe chete nekombuta yekuveza muchina, yakadzika yekunyora uye isina kudzika engraving, ichiumba inoyevedza, sehupenyu hwehunyanzvi basa. Girazi rakaiswa sandblasts rinoshandisa tekinoroji yepamusorosoro kukonzeresa pamusoro pegirazi rakatsetseka, nekudaro ichigadzira maturusi echinhu anochinja. Iko kuita kwacho kwakangofanana negirazi rine chando, kunze kwekunge girazi rine chando rakashandurwa kuita sandblasting. Mukushongedza kweye yekutandarira imba, inonyanya kushandiswa munzvimbo dzisina kutsanangurwa nzvimbo. Semuenzaniso, pakati penzvimbo yekudyira neimba yekutandarira, skrini yakanaka inogona kugadzirwa negirazi rakapwanyika.
Pashure: Basketball bhodhi girazi
Zvadaro: Sirivheri girazi, Mhangura yemahara Mirror
3mm 4mm 5mm Sandblasted girazi
8mm sandblasting girazi nokutengesa
Yakagadziriswa Sandblasted Glass
Girazi rinoshongedza sandblasted
Sandblast Girazi Kune Masuo
Girazi reSandblasted paMutengo Wakanyanya
Sandblasted Girazi Vs. Acid chinopinda girazi
Girazi reSandblasted Windows